यसरी मोबाइलबाट खिच्न सकिन्छ ‘डिएसएलआर’कै जस्तो तस्वीर ! « Sajilokhabar
यसरी मोबाइलबाट खिच्न सकिन्छ ‘डिएसएलआर’कै जस्तो तस्वीर !
काठमाडौँ, २७ पुस । सूचना र प्रविधिले फड्को मारे पनि धेरै कुरामा हामी अनविज्ञ छौं । हामीसँग साधन र स्रोत भए पनि त्यसको सही सदुपयोग गर्न जानिरहेका हुँदैनौं ।
अहिले सबैको हात हातमा स्मार्टफोन हुन्छ । त्यसबाट पनि उच्च क्वालिटीको फोटो खिच्न पनि सकिन्छ । जुन तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ । तपाईको स्मार्ट फोनबाटै डिएसएलआर क्यामराले खिचेको जस्तै उत्कृष्ट क्वालीटीको तस्वीर खिच्न सकिन्छ ।